Dafcadii Ugu Horaysay Ee Kaqalinjabisa Kuliyada Caafimaadka Qabridahar - Cakaara News
Dafcadii Ugu Horaysay Ee Kaqalinjabisa Kuliyada Caafimaadka Qabridahar
Q abridahar(CN) Axad, 25ka October 2015, Xaflad qalinjabin ah oo lagu maamuusayay dafcadii 1,aad ee kaqalinjabisa kuliyada caafimaadka qabridahar ayaa lagu qabtay magaalada qabridahar.
Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay maamulka gobolka qorraxay, maamulka magaalada qabridahar, mas'uuliyiinta kuliyadaha kaladuwan, horjoogayaasha hospitalka, odoyaasha, hooyooyinka, waalidiinta ardaydii qalinjabinaysay, ardayda iyo marti sharaf kale.
Waxaana munaasabadan kahadlay kusimaha maareeyaha, mayorka magaalada iyo gudoomiyaha gobolka oo dhamaantood ugu hambalyeeyay ardayda qalinjabinta. uguna mahadceliyay inay dadaalkoodii 3da sano ay maanta midhihiisii gaadheen. waxaa kale oo ay umahadceliyeen waalidiinta kusoo dadaashay ee heerkan inay yimaadeen ah kadanbaysay. waxayna kula dardaarmeen ardaydan inay shacabkooda ugu shaqeeyaan si wadaniyad iyo daacadnimo ku dheehan tahay.
Dhanka kalana, ardayda ayaa sheegay inay gudi doonaan abaalkii ay xukuumadu ugashay iyo inay waliba si xilkasnimo iyo daacadnimo leh ugu shaqaynayaan bulshada.
Hadaba munaasabadan oo ay kuqalinjabiyeen dafcadii ugu horaysay tan iyo intii la aas aasay kuliyada caafimaadka qabridahar oo laga joogo mudo 3 sano ah ayaa waxaa kaqalinjabiyay arday tiradoodu dhan tahay 90 arday oo baranayay culuumta kaladuwan ee shaybaadhka, dawaynta iyo umulisada oo diploma ah.
Waxaana xusid mudan in 60 kamid ah 90ka arday ee qalinjabisay ay ahaayeen gabdho